AirMule ambulance drone ka dhigaysa horyaalka gabadh - Rule News
AirMule ambulance drone ka dhigaysa horyaalka gabadh
ambulance Banaan qaatay duulimaadkeedii ugu horeysay ee untethered Israa'iil waa awood u degtey meelaha in helicopters ma karo, iyo inay awoodaan inay degay laba qof oo noqon doona
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “AirMule ambulance drone ka dhigaysa horyaalka gabadh” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo, theguardian.com on Wednesday 13 January 2016 12.01 UTC
ambulance A drone loogu talagalay in lagu degay laba qof ayaa iskooda u qaatay in ay hawada markii ugu horeysay.
AirMule The, taas oo qaadan kartaa off iyo dalka vertical, waxaa loogu talagalay xaaladaha halkaas oo caga helicopter ah waa ay CANQARA - sida goobaha dagaalka a. drone The, sameeyey by shirkad Israel Tactical Robotics, ayaa arkay dhacyo dhawaan ka dhacay horumarka laakiin waxaa loogu talagalay in ay kor u qaadaan si ay 450kg ilaa 31 miles.
hal-engined The, drone rotor gudaha qaaday in ay hawada ka xarunta imtixaanka ku meel gaar ah oo calan kor u at Airporka Megiddoo ka dib markii helo ansixin ka Authority Civil Aviation Israel Diyaaradii untethered.
Shirkadda ayaa qorsheeynaysa in ay muujiyaan AirMule ee awoodda xamuul-sidday sano gudahood, baaritaanka ka shisheeya-line-of-hortiisa ayaa sidoo kale la qorsheeyay.
The xarunta duulimaadka imtixaanka Tactical Robotics AirMule qotomiyey garoonka diyaaradaha Megiddoo ee waqooyiga Israa'iil. Sawir: taatikada Robotics
Iyadoo geeddi dagaalka waa hirgelinta cad nidaamka drone is haysta, awood u leh inay u soo duuli ee u dhaw dhismayaasha iyo xanibaado kale sababta oo ah nidaamka rotor gudaha, waxay siinaysaa laayeen weyn ka badan ambalaas oo hawada dhaqanka.
Taatikada Robotics ma aha shirkada kaliya ee ka shaqeeya ee drones dad-sidday. Ehang Chinese The 184 drone rakaabka ahaa muujiyay off at Waxaaad ee Las Vegas bilowgii January, awood u waday hal qof ilaa 100 kg ee miisaanka ilaa 23 daqiiqo xawaare ilaa 63mph.
Dagaallada drone: interceptor UAV cusub dallici sidii xal net-ka cayrinta si aan damiir lahayn duulaya
24392	1 Qodobka, Drones (ciidamada), Drones (non-ciidan), Israa'iil, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, News, Robots, Samuel Gibbs, Technology, news World
← Waxaan Just solan casriga a [VIDEO] daroogada New daaweysey murugada in ka yar 24 saacadood ! [VIDEO] →